Manahy tena fa tsy manantena, ka be fiketrika… | NewsMada
Manahy tena fa tsy manantena, ka be fiketrika…
Par Taratra sur 27/03/2018
Hanao ahoana ny fifidianana filohan’ny Repoblika amin’ity taona ity? Tsy fantatra hoe tena hisy na tsia; na hisy aza, be ny manahy korontana sy krizy. Ao anatin’ny tsy fifampitokisana tanteraka tsinona, fifampiandrasana kendry tohina, fifanilihana andraikitra, fiheveran-tena ho tsy mba diso…
Vokany, ifampiahiahiana izay mitranga rehetra, na izay hita sy re. Mandeha eo aloha ny tena, ahiahin’ny olona; mandeha aoriana, manahy olona. Vokany, tsy fantatra intsony izay marina sy diso, izay tsara sy ratsy, izay mahasoa sy ny manimba, izay mety mandalo ihany sy ny maharitra…
Efa ao anatin’ny savorovoro izao? Mby amin’ny fanahiana korontana sy krizy hoe mialoha na mandritra na aorian’ny fifidianana. Amin’izany, toa tsy misy tena sahy mamaky bantsilana izay mety ho fototry ny olana. Na efa amin’izany sahady, sanatria, izao toe-draharaha tsy hita hoe ahoana izao?
Ifandroritana be ihany, ohatra, ny amin’ny volavolan-dalàna mifehy ny fifidianana, ny famoahana ny tetiandrom-pifidianana. Manampy trotraka ny amin’ny hoe kajikajy sy paipaika politika. Raha mba misy miezaka manazava, tsy inoan-teny fa vao mainka aza manafintohina ny hafa.
“Tsara kokoa ny marina mangidy no ho ny fitaka mamy”, hoy ny ohabolana rosianina izay. Miaina sy velona ao anatin’izay hoe fitaka izay ve ny rehetra? Na hiseho amin’ny fifidianana tokoa ny marina: na ho voka-pifidianana hoeken’ny rehetra, na ho korontana sy krizy… efa mahamahina ny maro.
Inona tokoa no mety hampikorontana? Ny lisi-pifidianana tsy amin’izay izy, ny hosoka sy hala-bato, ny voka-pifidianana tsy araka ny safidim-bahoaka, ny amboletra hoe tsy maintsy voafidy ny tena… Tsy sahy miara-miatrika izany ny rehetra amin’izao? Na efa misy ny be fiketrika amin’izany…
“Fiadian’ny kanosa ny fitaka”, hoy ny ohabolana libianina. Izay izao raharaha izao? Tsy fifampitokisana, fifampiandrasana kendry tohina… Hitondra ho amin’ny inona ny fifidianana raha izany? Na sao tokony hatomboka amin’izany ny safidy mba tsy handehanana an-jambany…
Paositra Malagasy: nouveau bureau à Alasora 27/06/2019
Festival des baleines: rendez-vous du 11 au 14 juillet 27/06/2019